Ama-MCU weTexas Instruments alungele ukusetshenziswa kwe-Intanethi Yezinto (IoT)
Ama-Texas Instruments 'SimpleLink Wi-Fi CC3230s namaCC3230SF angama-MCU angenantambo. I-CC3230S ifaka i-256 KB ye-RAM, ukuphepha kwenethiwekhi ye-IoT, ubunikazi bedivayisi / okhiye, nezici zokuphepha ezingeni le-MCU ezinjengokubethelwa kohlelo lwefayela, ukubethela komsebenzisi kwe-IP (isithombe se-MCU), i-boot ephephile, kanye nokuphepha kokulungisa iphutha. I-CC3230SF yakhela ku-CC3230S futhi ihlanganisa i-1 MB ezinikezelwe ngumsebenzisi ye-Flash ephumelelayo ngaphezu kwe-256 KB ye-RAM. Yenza lula imiklamo ye-IoT nge-Wi-Fi CERTIFIED ™ wireless MCU.
Lawa madivayisi ayizixazululo ze-system-on-chip (SoC) ezihlanganisa amaprosesa amabili ngaphakathi kwe-chip eyodwa, kufaka phakathi iprosesa yohlelo lokusebenza lwe-Arm Cortex-M4 MCU ene-256 KB ye-RAM ezinikezelwe ngumsebenzisi ne-1 MB yokuzikhethela ye-Flash ephumelelayo, iprosesa yenethiwekhi ukusebenzisa izingqimba ezinengqondo ze-Wi-Fi ne-inthanethi. Lesi sisekelo esisekelwe kwi-ROM sithuthukisa ngokuphelele i-host MCU futhi sifaka umsakazo we-802.11b / g / n 2.4 GHz, baseband, ne-MAC onenjini enamandla ye-hardware ye-cryptography.
Lawa madivayisi afaka amakhono enza lula ukuxhumeka kwezinto ku-inthanethi. Izici eziyinhloko zifaka phakathi ukuhlala kwe-Bluetooth Low Energy (BLE) ne-Wi-Fi 2.4 GHz radio (CC13x2 / CC26x2), ukukhethwa kwe-antenna, kuze kufike kumasokhethi angu-16 ahambisanayo, isicelo sezimpawu zesitifiketi (CSR), i-online status status protocol (OCSP), i-Wi-Fi Izici ze-IoT ze-IoT zokonga amandla eziqinisekisiwe (i-BSS max idle, i-DMS, ne-proxy ARP), imodi engenabungozi yokulayisha ukuthunyelwa kwepakethe yethempulethi, nokuzula okusizwa yinethiwekhi. Lawa ma-MCU ayingxenye yesikhulumi se-SimpleLink MCU, indawo ejwayelekile, elula ukusebenziseka yentuthuko esekwe kukhithi eyodwa yokuthuthukisa isoftware (i-SDK) enethuluzi elicebile lesethi kanye nemiklamo yezinkomba. Umphakathi we-E2E ™ usekela i-Wi-Fi, i-BLE, i-sub-1 GHz, futhi ibamba ama-MCU.
Uhlelo lwe-Multiple-core architecture-on-chip (SoC)
Izici zokuphepha ezahlukahlukene, zisiza onjiniyela bavikele ubunikazi, idatha, ne-IP yesoftware
Izindlela zamandla aphansi zezinhlelo zokusebenza ezinikwe amandla ibhethri
Ukuhlalisana nemisakazo ye-BLE (CC13x2 / CC26x2)
Ukuzulazula okusizwa inethiwekhi
Izinga lokushisa lezimboni: -40 ° C kuye + 85 ° C
I-Wi-Fi iqinisekiswe yi-Wi-Fi Alliance
Uhlelo olungaphansi kohlelo lokusebenza lwe-MCU:
Ingalo ye-Arm Cortex-M4 ku-80 MHz
Imemori ezinikezelwe ngumsebenzisi: 256 KB ye-RAM ne-1 MB yokuzikhethela ye-Flash ephumelelayo
Isethi ecebile yemikhawulo nezikhathi
Izikhonkwane ze-I / O ezingama-27 ezinezinketho eziguquguqukayo ze-multiplexing
Uhlelo olungaphansi lwenqubo ye-Wi-Fi processor:
Izivumelwano ze-inthanethi nezokufaka isicelo
Isistimu engaphansi yokuphathwa kwamandla
Izici zokuphepha eziningi
Uhlelo olungaphansi lokuphathwa kwamandla:
Abaguquli abahlanganisiwe be-DC / DC basekela izinhlobo ezahlukahlukene zokutholakala kokuphakelwa
Izindlela ezinamandla aphansi ezithuthukisiwe
Amandla we-Wi-Fi TX: 18.0 dBm ku-1 DSSS, 14.5 dBm ku-54OFDM
Ukuzwela kwe-Wi-Fi RX: -96 dBm ku-1 DSSS, -74.5 dBm ku-54 OFDM
Umthombo wewashi: 40.0 MHz crystal nge-oscillator yangaphakathi, i-32.768 kHz crystal noma i-RTC yangaphandle
Iphakethe le-RGK: iphini elingu-64, iphakethe elingu-9 mm x 9 mm elincane kakhulu elingafakwanga (VQFN), iphimbo elingu-0.5 mm
Izicelo ze-Intanethi Yezinto:
I-automation yokwakha neyasekhaya:
Izinhlelo ze-HVAC nama-thermostats
Ukuqashwa kwevidiyo, izinsimbi zomnyango wevidiyo, namakhamera anamandla aphansi
Izinhlelo zokwakha ezokuphepha kanye nama-e-lock
Imitshina evuzayo yamanzi
Imishini: Izilawuli ezikude zasekhaya ezihlakaniphile
Ezokwelapha nezokunakekelwa kwempilo: CPAP
CC3230SM2RGKR ISIMPLELINK ARM CORTEX-M4 WI-FI M 2500 - Ngokushesha
CC3230SF12RGKR ISIMPLELINK ARM CORTEX-M4 WI-FI M 0